သော့ခတ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ ALPS Universal GPDT Gel liner များ တကယ
ကုန်ပစ္စည်းနာမည် Universal Gel အဖုံးဖြင့် Lock For Child
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်
ခြေတုအစိတ်အပိုင်းများ: ကလေးအတွက်သော့ခတ်ဖြင့် Universal ဂျယ်လ်အဖုံး
ထုတ်ကုန်အမည် သော့မပါဘဲနှင့်အတူ ALPS Universal GPDT Gel ကှနျ့
ပစ္စည်းအမှတ်။ GCL-GPDT / GPFR
အထူ 3mm / 6mm
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ universal gel liner သည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ALPS ဂျယ်လ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှု၊ စွမ်းအားနှင့် elasticity တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်လူနာမှကြာရှည်ခံမှု။ ဂျယ်လက်၏ကောင်းမွန်သောဆန့်နိုင်သည့်အရာသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဂျယ်လ်လက် ၀ တ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ ထူးခြားသောအဆုံးဒီဇိုင်းသည်ဂျယ်လ်လက်ကိုပြောင်းလဲသောအခါလက်ခံသည့်အခေါင်းအသစ်ကိုအစားထိုးရန်မလိုအပ်ပါ။2. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအထည်သည်ခံနိုင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေသည်၃။ အနည်းငယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစေးကပ်မှုသည် popliteal fossa ၏ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။4. ကွဲပြားခြားနားသောအထူနှစ်ခု: 3mm နှင့် 6mm ။
.Business type: ထုတ်လုပ်သူ (စက်ရုံ)
.Location: Luancheng ခရိုင်၊ Shijiazhuang City, Hebei Province, China
အားသာချက် - Comlete အမျိုးအစားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံးပြီးနောက် - ၀ န်ဆောင်မှုအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ၊ ဒီဇိုင်နာများအားလုံးရှိသည်
ခြေတုလက်တုနှင့် orthotic လိုင်းများတွင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသူများရှိသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း (OEM ၀ န်ဆောင်မှု) နှင့်ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ (ODM ၀ န်ဆောင်မှု) ကိုပေးနိုင်သည်။
အဓိကထုတ်ကုန်များ - အတုခြေလက်များ၊ အရိုးအထူးကုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးပစ္စည်းများ။ အနိမ့်ခြေလက် prosthetics, အထက်ခြေလက်, အရိုး
အသုံးအဆောင်များနှင့်အသုံးအဆောင်များ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ အတုခြေထောက်များ၊ ဒူးအဆစ်များ၊ ဘက်ပေါင်းစုံပြွန် adapters များ၊ အမျိုးမျိုးသောခြေတုလက်တုများနှင့်ဝါဂွမ်း၊ နိုင်လွန် / ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ / ဖန်များ
fiber stockinette, etc ငါတို့သည်လည်းအမြှုပ်အလှကုန်အဖုံး (AK / BK), အလှဆင်ငုတ်ခြေအိတ်, orthotics ဒူးကဲ့သို့သောခြေတုလက်တုအလှကုန်ထုတ်ကုန်ရောင်းချကြသည်။
ပူးတွဲ: နွေ ဦး သော့ခတ် / တစ်စက်လက်စွပ်သော့ခတ် / နောက်ဘက်သော့ခတ်။ orthotics ထုတ်ကုန်များ: အရိုးဆိုင်ရာမှန်ကန်သောဖိနပ်၊ ခြေထောက်ပံ့ပိုးမှု၊ AFO, AKFO, ခြေကျင်း၊ ဒူး၊ ခါး၊ ပခုံး၊
သတ္တုအထိမ်းအချုပ်, ခြေကျင်း / ဒူး / တံတောင်ဆစ်ပတ္တာ။ ကုန်ကြမ်းများ - PP / PE / EVA စာရွက်များစသဖြင့်။
ISO 13485 - CE、 SGS MEDICAL I / II ထုတ်လုပ်မှုလက်မှတ်။
1. အားလုံးစျေးနှုန်းများ EXW စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
2. နမူနာကိုရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်နမူနာကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဝယ်သူကပေးဆောင်သင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်။
ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက် (၃) ရက်အတွင်း (၃) ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်း။
4..Payment နည်းလမ်း - T / T၊ Western Union၊ L / C ။
ရှေ့သို့ ကလေးများအတွက် AK Cosmetic Foam Cover (ကြိုတင်ပုံသဏ္)ာန်)
နောက်တစ်ခု: ကလေးများအတွက်ဂျယ်အဖုံးသော့ခတ် 601
ကလေးများအတွက် AK Cosmetic Foam Cover (ကြိုတင်ပုံသဏ္)ာန်)
Sach ခြေလျင် Adapter ကိုလူမီနီယမ်
ကလေးများအတွက် Angle Tube Clamp Adapter
ကလေးများအတွက်4hole Socket Adapter